Uganda oo raadineysa koox wadata weerar qorsheysan & USA oo digniin soo saartay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Uganda oo raadineysa koox wadata weerar qorsheysan & USA oo digniin soo saartay
A warsame 13 September 2014 14 September 2014
Mareeg.com: Dowladda Uganda ayaa sheegtay in unug ka tirsan Al-shabaab ay galeen dalkeeda, islamarkaana ay qorsheynayaan weerarro ay geystaan halkaas.
Taliyaha ciidamada Uganda, Jen. Katumba Wamala ayaa dhawaan sheegay inay dhici karto inuu la soo weeraro Kampala, isagoo sheegay in mas’uulka cusub ee hoggaanka Al-shabaab la wareegay uu qorsheynayo weeraro lagu weerarayo Uganda.
“Weerarada argagixiso ee Alshabaab noogu geysan karaan Muqdisho iyo gudaha Uganda waa kuwo xaqiiqo ah, maxaa yeelay Alshabaab waxey ogyihiin inaan horseed u nahay awoodda looga qabsaday Buul Mareer, Kurtuwaareey iyo meelo kale oo Muqdisho u jira ilaa 120 KM” ayuu yiri Gen Katumba Wamala todobaadkii hore u sheegay warbaahinta Uganda.
Dhanka kale, Safaarada Maraykanka ee dalka Uganda ayaa soo saartay digniino ku aadan muwaadiniinteeda in laga yaabo weeraro lagu qaado gudaha dalka Uganda.
Safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamada Ugand ay ka wadaan dalkaas howlgal amaan oo lagu dagaalayo koox dooneysa iney halkaas ka geystaan weeraro, waxeyna dadka Mareykanka ugu baaqaday iney feejignaadaan.
“Dhammaan muwaadiniinta Maraykanka ah waxaa lagula talinayaa in ay guryahooda joogaan ama ay meel ammaan ah tagaan inta ay ciidamada Ugand ku guda jiraan howlgalka gaarka ah” ayaa lagu yiri warka kazoo baxay safaaradda Mareykanka.
Dowladda Ugand faahfaahin kama bixin nuuca ay yihiin kooxda la sheegay iney galeen dalkaa, ee doonaya iney ka geystaan weeraro.
Isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa safaarada Maraykanka ee dalka Uganda waxa ay ka digtey weeraro aargudasho ah oo ay soo qaadaan ururka Alshabaab kadib markii dhowaan la diley hogaamiyihii ururka Alshabaab Axmed Godane.
Ururka Alshabaab ayaa sheegtay weeraro horay lagu qaaday dalka Kenya, Ugand, Djibouti iyo weliba dalka Soomaaliya.
Uganda ayaa ah dalka ay ciidamada ugu badan ee AMISOM ka joogaan Sooamaaliya, kuwaas oo dagaal kula jira Al-shabaab, waxaana la xusuustaa in sanadkii 2010 qaraxyo ka dhacay Kampala oo Alshabaab sheegteen lagu dilay 76-qof.
Maxaa looga hadlay shir aan caadi aheyn oo ay Muqdisho ku yeesheen Golaha Wasiirada?
Jawaari: Berri ayuu furmayaa shirka dib u sheehiisiinta Koonfur Galbeed